Read x_grade_5_lesson_1.cdr text version
Igama lekati yakho: _________________________________________________________________ Inkangeleko: Le kati imzimba mde obhityileyo inofele olumthubi-bomvu olunamabala amnyama tsho. Intloko icuthekile ineempawu zeeenyembezi ezibaleka ukususela ekupheleni kwamahlo ukuya imlonyeni inamehlo amthubi. Indawo yokuhlala: ___________________________________________________________________ Isityo: _____________________________________________________________________________ Uhlobo Lokuzingela: _________________________________________________________________
Ubudala bokufikelela inqanabo lokwabelano ngesondo: ___________________________________ _ Isignogrisi / Ingozi emntwini: __________________________________________________________
Igama lekati yakho:__________________________________________________________________ Inkangeleko: Lekati inkulu-imabala-bala imfutshane, inesiqu esonmelelyo inezihluhu ezomeleleyo (muscular). Ufele luphawulwa ngamabala amdaka arhangqwe bubumnyama intloko inkulu inomhlathi onamandla. Indawo yokuhlala: ___________________________________________________________________ Isityo: ______________________________________________________________________________ Uhlobo Lokuzingela: _________________________________________________________________
_ Ubudlelwane: ________________________________________________________________________
Ubudala bokufikelela inqanabo lokwabelano ngesondo: ____________________________________ Isignogrisi / Ingozi emntwini: __________________________________________________________
Ulwaziso lwengwenkala - isigaba 5
Igama lekati yakho: _________________________________________________________________ Inkangeleko: Eyona kati inkulu kuzo zonke, inemigca emnyama jufele olu-orenji, iinkunzi zinoboya bekhola obudandazalayo. Indawo yokuhlala: ___________________________________________________________________ Isityo: ______________________________________________________________________________ Uhlobo Lokuzingela: _________________________________________________________________
Igama lekati yakho: _________________________________________________________________ Inkangeleko: Le kati iphakathi ngobukulu / ubunzima inomzimba omde obhityileyo inofele olumthubibomvu ukuya kubomvu-mdaka. Imisila itswejisiwe(tapered), iindlebe ezicuthekileyo ezitsoro ezinezihlwithwa ezide izimnyama. Imilenze yangasemva mide kuneyangaphambili. Indawo yokuhlala: ___________________________________________________________________ Isityo: ______________________________________________________________________________ Uhlobo Lokuzingela: _________________________________________________________________
Igama lekati yakho: _________________________________________________________________ Inkangeleko: Lekati incinci ineentlabo zezihombo namabala. Indawo yokuhlala: ___________________________________________________________________ Isityo: ______________________________________________________________________________ Uhlobo Lokuzingela: _________________________________________________________________
Ubudala bokufikelela inqanabo lokwabelano ngesondo: ____________________________________ Isigrogrisi / Ingozi emntwini: __________________________________________________________
Izikhokhelo mmandla ezigcwalisiweyo
INGONYAMA: Panthera leo
Inkangeleko: Le kati inkulu inofele olumbala-mnye ompofu ezinye zinesiphelo somsila esimnyama iinkunzi zineezingci ezide. Indawo yokuhlala: ummadla oshushu ongenamithi Isityo: Iinyamakazi ezinkulu maxa amaninzi. Uhlobo ezingela ngalo: Ingumzingeli wasemini nasebusuku. Ichwechwela kufutshane kanga ngoko, ukuze igqibezele ngoleqo olufutshane. Ixhumela islwanyana esizingegelayo maxa amaninzi ukze izokuyiwisa. Ubudlelwane: Sisilwanyana esinobudlelwane, sihlala kumaqela eentsapho(prides). Ukufikelela kwinqanaba lokuzala: Iinkunzi zifikelela kwinqanaba lokuzala kwiminyaka emihlanu. Isignogrisi / Ingozi emntwini: Ezikati ziyingozi empilweni yomntu.
INGWENKALA: Acinonyx jubatus
Inkangeleko: Le kati imzimba mde obhityileyo inofele olumthubi-bomvu olunamabala amnyama tsho. Intloko icuthekile ineempawu zeeenyembezi ezibaleka ukususela ekupheleni kwamahlo ukuya imlonyeni inamehlo amthubi. Indawo yokuhlal: ummandla oshushu ongenamithi. Isityo: Iinyamakazi eizincinci ixesha elininzi. Uhlobo Lokuzingela: Izingela emini, isichwechwela isileqe ngesantya esiphezulu isilwanyana esizingelayo, igqibezele ngokusigabangxisa(trip) isikrwitshe. Ubudlelwane: Zizilwanyana ezingamalolo, kukho iinkunzi ezenze amaqela esizalo. Iimazi zishiya amantshontsho azo ebudala bulishumi elinesibhozo ubudala. Ufikelelo kwinqanaba lokuzala: Kwiminyaka emibini. Isignogrisi / Ingozi emntwini: Asiyiyo ingozi empilweni yomntu.
INGWE-ENAMABALA: Panthera pardus
Inkangeleko: Lekati inkulu-imabala-bala imfutshane, inesiqu esonmelelyo inezihluhu ezomeleleyo (muscular). Ufele luphawulwa ngamabala amdaka arhangqwe bubumnyama intloko inkulu inomhlathi onamandla. Indawo yokuhlala: ummandla oshushu ongenamithi, amahlathi, iintaba. Isityo: Inyamakazi isikakhulu. Uhlobo Lokuzingela: Izingela ngobusuku, ixhumela ibulale ngokrwitsho, inyuke nokweyibuleleyo emthini. Ubudlelwane: Lilolo, ngaphandle kwemazi enamantshontsho, ethi ishiye amantshontsho ayo ineminyaka emibini. Ufikelelo kwinqanaba lokuzala: Luqikelelwa kwiminyaka emithathu. Isignogrisi / Ingozi emntwini: Ziyingozi empilweni yomntu.
INGWE: Pathera tigris
Inkangeleko: Eyona kati inkulu kuzo zonke, inemigca emnyama jufele olu-orenji, iinkunzi zinoboya bekhola obudandazalayo. Indawo yokuhlala: amahlathi Isityo: Ihagu yehlathi nexhama laphesheya(deer). Uhlobo Lokuzingela: Umzingeli wasebusuku, ngokuchwechwela ixhumele silwanyana eso isizingelayo. Ubudlelwane: Lilolo ixesha elininzi kodwa inakho ukwabelane ngesidlo sayo. Ufikelelo kwinqanaba lokuzala:e: Luqikelelwa kwiminyaka emihlanu. Isignogrisi / Ingozi emntwini: yingozi empilweni yomntu.
INGQAWA: Felis caracal
Inkangeleko: Le kati iphakathi ngobukulu / ubunzima inomzimba omde obhityileyo inofele olumthubibomvu ukuya kubomvu-mdaka. Imisila itswejisiwe(tapered), iindlebe ezicuthekileyo ezitsoro ezinezihlwithwa ezide izimnyama. Imilenze yangasemva mide kuneyangaphambili. Indawo yokuhlala: ummandla oshushu ongenamiti, amahlathi. Isityo: Iintaka neenyamakazi ezincinci Uhlobo Lokuzingela: Izingela ngobusuku, iyakwazi ukuxhumela intaka ebhabhayo. Ithanda ukusa oko ikubuleleyo phezu komthi. Ubudlelwane: Ilolo lekati, imazi ishiya amantshontsho ayo enonyaka ubudala Ufikelelo kwinqanaba lokuzala:ne: Kuqikelelwa kwiinyanga ezingama-14. Isignogrisi / Ingozi emntwini: Asiyongozi empilweni yomntu
IKATI YASEKHAYA: Felix domesticus
Inkangeleko: Lekati incinci ineentlabo zezihombo namabala. Indawo yokuhlala: idolophu. Isityo: Izilwanyana ezincinci, kuquka iimpuku, iintaka kwakunye nezinambuzane. Ukutya kwekati yasekhaya.. Uhlobo Lokuzingela: Ichwechwela ixhumele ekuzingelayo, ingadlala ngako ukutya isebenza emini nasebusuku. Ubudlelwane: Lilolo isikakhulu kodwa ibakha ubuhlobo kwezinye iimeko zentlalo. Ufikelelo kwinqanaba lokuzala: Kuqikelwelwa kunyaka omnye. Isignogrisi / Ingozi emntwini: Asiyongozi ebantwini.
Ummiselo xabiso wezikhokhelo-mmandla:
Umfundi akakwazanga ukubeka ngendlela efanelekileyo ulwazi olufumaneke kumakhasi esikhokhelo semimmandla.
Ukwazile umfundi, maxa amaninzi, ukubeka ulwazi alufumene kumakhasi ezikhohelo mmandla.
Umfundi ukwazile ukulubeka ngendlela eyiyo ulwazi emakhasini waze waluhlahlela ngokokuchanekileyo kwizikhokhelo-mmandla.
Umfundi ubonakalise uqondo olunzulu lolwazi lokusemakhasini, umzekelo: uqikelelo olululo lokuba kolohlobo lwesilwanyana esithi sibekuqelaniso xa sinamathole kuphela, eso silo sibizwa ngokuba lilolo, apho silo eso sizingela emini sizakubizwa njengesizingeli sasemini(diurnal).
Wabelana ngeengcinga anikele neengcebiso kwizihloko ezingaxhaphkanga. Usebenzise iindlela zentsebenziswano kuqhagamshelwano ngokokuchanekileyo kwiimeko zoqelaniso. Usebezise ulwimi lomziba olululo, nobuchule bembonakaliso(presentation). Usebezisa ulwazi lwangaphambili kuqondo olunentsingiselo. Ubhala imibhalo yolwazi echaza ulwazi ngokokucacileyo. Ulusebenzise ngokokuchanekileyo ulwazi.
LO#3: Ukufunda noqwalaselo LO#4: Ukubhala LO#5: Ukucinga nengqiqo